Daawo: U diyaargarowga Bisha Ramadaan iyo Ummada Soomaaliyeed ee Muslimka ah- “Sheikh Umul” – idalenews.com
Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya iyo Guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya ayaa laga dareemaayaa diyaar garoowga bisha Barakeysan ee Ramadaan, iyadoona suuqyada Magaalada oo dhan adeeg raashiinka aad uga socdo.
Suuqayada kala ah ee dalka gaar ahaa kuwa magaalada Muqdisho sida suuqweynaha Bakaaraha, Suuq Bacaad iyo kan Xamar Weyne ayaa waxaa ka soconaaya diyaar garoowga Bisha Barakeysan ee Ramadaan, taasoo saacado qura ay naga xigto.
Shacabka ayaa soo iibsanaaya waxyaabaha inta badan la isticmaalo Bishaasi, iyadoona sidoo kale ay jiraan dad bishaasi kaliya ganacsi abuurta, sida inay iibiyaan Sambuusiga, Barafka, Qudaarta iyo waxyaabo kale oo Muhiim ah.
Diyaar garoowgaan magaalada Muqisho kaliya kama socdo ee guud ahaan gobalada dalka Soomaaliya ayaa laga wada dareemaayaa arinkaan, iyadoona dad badan ay is diyaariyeen.
Bisha Barakeysan ee Ramadaan iyo Sida ay ummada Muslimka ah ee Soomaaliyeed u qaabili lahaayeen ayaa muxaadaro qiimo leh Sheikh Umul u gudbiyey ummada Soomaaliyeed ee muslimka meel kastaa ay joogaan.
Ka daawo Muxaadarada Bisha Ramadaan oo saacad qura ay naga xigto: